How kuwana Router IP Address
Ndira 21, 2019 Denial245
Kuti tiwane kuwana router wako, unofanira kuva router portal mashoko. Uye kuti kuwana, unofanira kuziva Router IP Address. An IP Address ndiye Internet Protocol ndiwo hondo kana zvakarukwa inowanikwa kuzivikanwa uye nzvimbo kugadzirisa uye rinoumbwa nhamba mana vakaparadzana nevanhu zvakazara vanorega. ikozvino, kana usina pfungwa pamusoro wako Router IP Address zvino tichatora kukubatsira Find Router IP Address pano chaizvo nyore nhanho.
tsime, ari IP kero nokuda routers dzinosiyana Naizvozvo Os(uchishandisa maitiro) uye siyana namano. In this post, isu zvakapa nyore matanho vakapindura “How kuwana Router IP Address” nokuti zvakasiyana Os uye siyana namano.
Mawanirwe Router IP Address
Router IP Address musi Windows Os
Kana kombiyuta yako kushandisa Wi-Fi maererano ipapo ichaona 'Wireless Network Connection' panzvimbo 'Local Area Connection' apo On Microsoft Windows 8, ari Wireless kubatana ichaonekwa sezvo 'Wireless Lan adapteri Wi-Fi', uye that no wired kubatana anonzi 'Ethernet adhaputa Ethernet'.
Zarura Command chiriporipocho nokutsvaka “cmd” vari kutsvaka bhokisi.
The Black hwindo ichazarurwa mukati Computer wako apo unofanira mhando “ipconfig”.
The goho ichava imomo nokuti imi makakohwa kuna Router Default Gateway sezvinoratidzwa nomufananidzo pazasi.
Zarura chirwere pahwindo nekudzvanya pamusoro menyu ndokubva Finder ndokubva mafomu ndokubva Utilities ndokuzo Terminal.app.
mhando “netstat -NR | grep default” ipapo.
Uye goho achava aripo chii imi makakohwa kuna Router Default Gateway dzinotaurwa nomufananidzo pazasi.
Heano humwewo matanho kuti IP kero mashoko.
Click on Apple Muterere.
Sarudza nzira iripo sezvo 'System Zvamada'.
Click on 'Network’ Icon.
Sarudza yakakodzera rezvebonde kubatana uye tinya 'Advanced’ Ipfungwa.
tinya ‘TCP kana IP‘ Tab uye IP kero ichava imomo pamadziro ako.
Router IP Address musi Chrome Os
Click on ziviso nzvimbo yaiva pakati taskbar.
Click on “Chokuita xyz” Ipfungwa iro pasi iro rinowanika.
Sarudza zita renyu pasina tambo paIndaneti uye tinya nezvechisarudzo sezvo “Network” Tab kuratidza migumisiro kusanganisira router raMwari IP kero.
Default Router IP Address musi Linux
Sarudza nzira iripo “mafomu“.
Click on “System Tools” ndokuzo “chiteshi“.
mhando “ipconfig” uye Uye goho ichava imomo nokuti imi makakohwa kunotora Router Default Gateway pedyo ‘inet addr'.
Router IP Address musi iPhone iOS
Tsvaka nezvechisarudzo iripo sezvo “Settings” uye zvadaro tinya “WiFi“.
Tsvaka uye tinya nezvechisarudzo “Wireless Network” yauri Parizvino zvakabatana.
Tarisa zviri DHCP chikamu kuwana kwenyu router kwakaita default IP Address.
sei kuwana router Rinozvikudza ip kero mac pumpkinsei kuwana WiFi Rinozvikudza ip kero iri AndroidModem Rinozvikudza ip kerorouter yangu Kurongwarouter Rinozvikudza ip Kero mazitarouter Rinozvikudza ip Kero Softwarechii Rinozvikudza ip kero yangu routerWireless Rinozvikudza ip kero